यौन र स्वास्थ्य | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
बीबीसी । के यौन सम्पर्कका कारण कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण सर्न सक्छ?
डा. एलेक्स जर्ज…
काठमाडौं। देश कोरोेना भाइरसको बिरुद्ध लडिरहेको बेला चाौधरी ग्रुुुुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीभने सरकारको आह्वान गरेको सहयोगका विरूद्वमा लागेको सूचना प्राप्त भएको छ । कांग्रेसका सांसद तथा अर्वपति ब्यापारी चौधरी सरकारले स्थापना गरेको कोरोना बिरुद्धको राहत कोषमा पैसा नदिन लविङ…
पूजामाथि सामूहिक बलात्कार भएको सर्वोच्च अदालतकाे ठहर
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूजा बोहोरा सामूहिक बलात्कारमा परेको ठहर गर्दै दुईजनालाई दोषी प्रमाणित गरेको छ। यसअघि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको फैसला उल्ट्याउँदै उच्च अदालत न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले बिहीबार जबर्जस्ती करणी मुद्दामा बैतडीका सागर…
लामो समयसम्म शारिरिक सम्पर्क नगर्दा युवा युवतीमा देखिन्छन् यस्ता समस्या
एजेन्सी । कारण जुनसुकै होस् तर हामी सबैका लागि एउटा यस्तो समय आउन सक्छ, जतिबेला हामी शारिरिक सम्पर्क गर्न सक्दैनौं । यो विषय विवाहित र अविवाहित सबैका लागि लागू हुन्छ ।
विवाहित व्यक्ति पनि सधैं शारिरीक सम्पर्क गर्न सक्षम हुनसक्छन्…
एजेन्सी । स्तनमा हुने स्पर्समा महिलाहरुले यौन आनन्द प्राप्त गर्छन्, भन्ने कुरा त हामी सबैले थाहा पाएकै हो । एक अनुसन्धानले स्तनको टुप्पो र योनी दुबै अंगबाट प्रसार हुने तरङ्ग मस्तिस्कको एउटै भागले ग्रहण गर्ने भएकाले महिलाहरुले यसबाट यौन…
शारिरीक सुखभोग गर्दा–गर्दै युवतीको निधन, कारण थाहा पाउँदा चिकित्सक नै चकित
काठमाडौ । हरेक दम्पतीले आफ्नो यौन जीवन खराब नहोस् भन्ने कामना गर्दछन् । यसका लागि उनिहरुले अनेक प्रयत्न गर्ने गर्दछन् । एक जोडिले शारिरीक सुखका लागि पहिले औषधीको सेवन गरेर शारिरीक सुखको कार्यमा रहे ।
तर दुर्भाग्य यसका कारण युवतीले…
हस्तमैथुनले स्वास्थ्यलाई कसरी हानी गर्छ ?
एजेन्सी । हस्तमैथुन एउटा सामान्य यौन व्यवहार हो । तर यो अन्य यौन व्यवहार भन्दा यसकारण फरक छ कि अत्याधिक हस्तमैथुन गर्नाले शरीरमा मानसिक तथा शारिरीक असन्तुलन तथा अन्य साइड इफेक्ट निम्त्याउन सक्छ । तर यसको असर हरेक मानिसमा…
अचम्मका हुन्छन् महिलाका सेक्स चाहना, हेर्नुहोस् १० रोचक तथ्य !
एजेन्सी । जीवनमा केही न केही फरक र उत्ताउलो खालको सेक्स अनुभव गर्न चाहने एक अध्ययनले देखाएको छ । मौका पाउँदा उनीहरुले अनौठो–अनौठो यौनिक अभ्यासको परीक्षण समेत गर्न मन पराउने तथ्य उक्त अध्ययनबाट देखिएको हो । युवतीहरुले यौनको बारेमा…
एजेन्सी । शारीरिक सम्पर्क मानिसको जीवनको एक नभई नहुने कुरा हो । यसलाई निकै सही तरिका र सही समयमा गर्न सके एक विवाहित जोडीलाई यसले निकै नै आनन्द र सुख दिने गर्छ ।
तर, सेक्सको सबैभन्दा राम्रो समय कति बेला…